यश स्टारर् ‘केजीएफ २’को हिन्दी बेल्टले एक सातामै कमायो २५५ करोड ! « News24 : Premium News Channel
यश स्टारर् ‘केजीएफ २’को हिन्दी बेल्टले एक सातामै कमायो २५५ करोड !
काठमाडौं । साउथका सुपरस्टार यशको प्रदर्शनरत फिल्म ‘केजीएफः च्याप्टर २’ले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । ‘केजीएफ २’ले कयौं ठूलठूला फिल्महरुको रेकर्ड ध्वस्त गर्दै सबै भन्दा छिटो २५० करोड कलेक्शन गर्ने फिल्म बनेको छ । ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शले फिल्मको कमाईको लेटेस्ट आँकडा सेयर गरेका छन् ।
उनले टूवीट गर्दै केजीएफ २ को हिन्दी भर्सनले बलिउड र साउथ फिल्महरुको रेकर्ड तोडेको जानकारी गराएका छन् । दर्शकमाझ रिलिजमा आएको सातौं दिन अर्थात् बुधबार मात्रै पनि फिल्मले १६.३५ करोडको कलेक्शन गरेको थियो । योसँगै केजीएफ २ को हिन्दी भर्सनको कमाई एक सातामा १५५.०५ पुगेको छ ।
तरण आदर्शका अनुसार फिल्मले विहीबार ५३.९५ करोड, शुक्रबार ४६.७९ करोड, शनिबार ४२.९० करोड, आइतबार ५०.३५ करोड, सोमबार २५.५७ करोड, मंगलबार १९.१४ करोड र बुधबार १६.३५ करोड गरी कुल २५५.०५ करोडको कलेक्शन गर्न सफल भएको हो ।
केजीएफ २ ले तीब्र रुपमा कमाई गर्ने बाहुबली, दंगल, सञ्जु, टाइगर जिन्दा हैलगायत ठूला फिल्महरुलाई पछि पारेको छ । जानकारी अनुसार यशको केजीएफ २ को सबै भर्सनले भारतमा मात्रै ५०० करोडको आँकडा पार गरिसकेको छ ।